यता सहिद परिवारको रकममा वाइक चढ्छन्, उता सहिद परिवार सिडियो कार्यालय धाउछन् (सरोजको शब्दमा) | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » यता सहिद परिवारको रकममा वाइक चढ्छन्, उता सहिद परिवार सिडियो कार्यालय धाउछन् (सरोजको शब्दमा)
यता सहिद परिवारको रकममा वाइक चढ्छन्, उता सहिद परिवार सिडियो कार्यालय धाउछन् (सरोजको शब्दमा)
saharatimes Wednesday, July 13, 20160No comments
अस्ति हामी कुष्ठरोगीहरु को इलाजको लागि पहल गर्न मोहम्मद रियाज साफीसँग रौतहट पुगेका थिए । त्येही क्रममा त्यहाँका स्थानीय पत्रकार अभिमन्यु पटेलको मद्दतबाट आन्दोलनमा शहिद भएको मेहरुद्दीनको परिवारसँग भेट्ने सौभाग्य पनि पाए ।
शहिद मेहरुद्दीनको घर रौतहट क्षेत्र नं २ गा.वि.स. अकोलवा वार्ड नं ७ बलुवा टोल गाउँको मुखमै रहेको छ। घरको मुखमा गाडी लगाउन पाएका छैनौँ कि स–साना बाल बालिकाहरुको साथै गाउँवासीहरु जम्मा हुन् थाले । सबैलाई लाग्यो कि हामी सरकारीस्तर बाट आएका छौ र शहिद परिवारको लागि क्षतिपुर्ति वापत पाउने १० लाख दिन आएका छौँ । शहिदको आफन्त र गाउँवासीलाई आफ्नो परिचय दिए र जानकारीहरु बटुल्न थाले ।
शहिद मेहरुद्दीनको ४ छोरा र १ छोरी, ६० वर्षीय आमा आर्बू र ३५ वर्षीय श्रीमती समिना रहेक छन् । करिव १६ वर्षीय सबैभन्दा जेठो छोरा भारतमा काम गर्छन् । बाँकी सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको जिम्मेवारी श्रीमती समिनाको काँधमा छ। एउटा छोरा मदरसा पढ्न गएपनि स्कूलको पढाईबाट सब बन्चित छ। शायद कमजोर आर्थिक अवस्था र पढाईप्रति जागरुकता कम भएको हुनाले कोइ स्कुल जाँदैन होला । हुनत त्यसभेगमा अरु परिवारहरुमा पनि शिक्षा प्रति रुचि कम देखियो ।
आन्दोलनको क्रममा मेहरुद्दीनलाई पछाडीबाट संवेदनशील अंगमा गोलि लागेको थियो । उनका इलाज काठमाण्डु र वीरगञ्ज दुबै ठाउँमा भयो । पछि अलि सामान्य भएपछि गाउँमा आएर बसे पनि तर पछि फेरी स्वास्थ असामान्य भएपछि वीरगञ्ज इलाजको लागि गए । इलाज कै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले तयार परेको शहिदको नामावलीमा मेहरुद्दीनको नाम भएपनि सरकारी लिस्टमा छैन । जसले गर्दा सरकारबाट पाउनु पर्ने दश लाख क्षतिपुर्ति पाएको छैन । रौतहटक सिडिओको भनाइमा दुर्इ चोटी मेहरुद्दीनका श्रीमती काठमाण्डौ गए तर खालि हात नै फर्किनु पर्यो ।
एक चोटी सिंहदरवार छिर्न पास नभएको कारण कसैसँग नभेटि सिंहदरवारको गेटबाट फर्किनु पर्यो, सबिना भन्छिन् । मोर्चाको नेताहरुलाई लिएर किन नजान्नु भएको प्रश्नको उतरमा उनि भनिन्, कहाँ कोइ नेता आउँछन हामी कहाँ, शुरु शुरु मा भेट्न र फोटो खिचाउन धेरै जना आए तर काम परेको बेला कोई आईदिएन । हाल सम्म ४९ हजार आर्थिक सहयोग पाएको छु जसमा जनकपुरको कृष्णचन्द्र प्रसाद साह (मधेश रिलिफ फन्ड) मार्फत २५ हजारको ठुलो सहयोग पाएको छु ।
एकचोटी यस्तै सहयोग लिन जाने बेलामा जसले आफ्नो मोटरसाइकलमा बसाएर लग्यो एक हजार पेट्रोल वापत काट्यो ।
अहिले समिना दिनहुँ सिडिओ कार्यालयको चक्कर लगाई रहेकी छिन् । स्थानीय पत्रकार अभिमन्यु पटेलजीको आगाडी सहयोग गर्ने आश्वाशन दिएका छन् । यताहेल्प मधेशी विरेन्द्रकुमार साहबाट पनि शहिदको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वाशन दिएका छन् । आशा गर्छु यिनीहरुको आश्वाशन यथार्त मा बदलिन्छ।
उनका एक १२ वर्षीय छोरालाई जनकपुरको एउटा स्कुलमा कक्षा १२ सम्म होस्टलमा राखेर पढाई दिने प्रस्ताव राखे पनि उनि तत्काल मानेनन् । म आफ्नो फोन नं. छोडेर आएको छु, पढ्ने इच्छा जागे फोन गर्नु होला भनेको छु ।
यसै लेख मार्फत मोर्चाको स्थानीय र शिर्ष नेताहरु तथा सरकारसँग उक्त शहिद परिवारको लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै कसैले सिधा आर्थिक सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भन्ने सबिनाजीको बैंक अकाउन्ट डिटेलको लागि सम्पर्क गर्नु होला ।